I-Muzhai B&B eduze ne-Wal-Mart e-Zhaotong Lanyue enamagumbi okulala amabili, igumbi elilodwa lokuhlala eliphindwe kabili-eduze kwesibhedlela sedolobha, i-Wal-Mart, i-Provincial Geng Park, i-District No. 2 Middle School, izikole zamabanga aphansi ezi-2, kanye nezikole zamabanga aphansi eziyisi-6, Isikhumulo sezindiza, Isiteshi sikaloliwe - I-Airbnb
I-Muzhai B&B eduze ne-Wal-Mart e-Zhaotong Lanyue enamagumbi okulala amabili, igumbi elilodwa lokuhlala eliphindwe kabili-eduze kwesibhedlela sedolobha, i-Wal-Mart, i-Provincial Geng Park, i-District No. 2 Middle School, izikole zamabanga aphansi ezi-2, kanye nezikole zamabanga aphansi eziyisi-6, Isikhumulo sezindiza, Isiteshi sikaloliwe
Zhaotong city, Yunnan, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-沐歌
U-沐歌 unokuphawula okungu-27 kwezinye izindawo.
Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Mu House:
Iseduze nepaki elihle lesifundazwe iGeng Guoxue Park. Igumbi lifakwe i-500M ye-WiFi yesivinini esiphezulu, ne-smart TV ye-movie namalungu e-TV.
Ukuthenga, ukudla, ukuzijabulisa nokuzijabulisa kwe-Muzhai B&B konke kuyatholakala ukuhlangabezana nezidingo zakho zansuku zonke eZhaoyang City, okuhlanganisa izitudiyo zamamuvi, izitolo zekhofi, izindawo zokudlela zamaShayina nezaseNtshonalanga, izindawo zokudlela zamabhodwe ashisayo, i-KFC, i-sauna nezindawo zokuwasha izinyawo, izikhungo zokuzivocavoca. , amabhange, kanye nezikole. (Zhaotong College, Zhaoyang No. 2 Middle School, District Cha 6 Primary School, No. 2 Primary School, Nursery enkulisa, njll), Wal-Mart Shopping Centre, City Hospital, wesifundazwe Geng Guoxue Park , uhamba imizuzu emihlanu kuphela. Kuthatha imizuzu eyishumi kuphela ngemoto ukufinyelela sezindiza, imizuzu engu-15 ngemoto esiteshini sesitimela, futhi emizuzwini emihlanu kuphela ngemoto International Trade City ne Jinghai zokwakha City. Kukhona sebhasi eceleni kwehhotela lethu. Taxi futhi ezinye izinto zokuhamba ziqonde ngqo phambi kwendawo yokuhlala.
Indawo yokuhlala ifakwe amabhayisikili, imishini yokuwasha ezenzakalelayo, ikhishi nezitsha zokudlela Ungenza ukudla kwakho futhi uwashe ngokwakho, okuyinto elula futhi efudumele njengasekhaya! Ihlanzekile futhi icocekile, iyacabangela futhi iyacabangela! Ungakwazi ukujikeleza ukuze uvakashele ipaki yokulima yesifundazwe nezinye izindawo ofuna ukuya kuzo e-Zhaocheng. Ukuhlala e-Mu Zhai B&B kuzokwenza uzizwe ufudumele futhi usekhaya, umusha futhi umuhle, futhi kukuvumele ujabulele injabulo yohambo!
I-Mu Ge Homestay yamukela izivakashi zazo zonke izizinda. I-Mu Zhai B&B isebenzisa indlela yephasiwedi yokungena ngokwakho.
Kunamagumbi okulala amabili ahlukene nangasese e-Muzhai B&B, anegumbi lokuhlala elihlukile, igumbi lokugezela, ikhishi, njll. Isitayela sesimanje siyindikimba eyinhloko, futhi sihlotshiswe ngezesekeli zasekhaya ze-neoclassical. Iphephadonga legumbi lokuphumula elithunyelwe lisuka e-Italy linqamula ulwandle, kanye nodonga lwangemuva lwegumbi lokuhlala lwesitayela esifanayo nese-Jinmao Hyatt, luveza ukuthintwa kokunethezeka ngokhiye ophansi. Usuku lonke. Isikhathi sithambile lapha.
Kukhona zonke izinhlobo zokuthenga, izindawo zokudlela, ezokuzijabulisa nezokuzijabulisa. Ungakwazi ukunambitha ukudla okulula okuhlukile kwase-Zhaotong eduze nendawo yokuhlala: izikeshi zenyama encane, ujeli, isiyelo sekhekhe likawoyela, ufulawa omncane wesoya, ubhatata ogazingiwe, ubhatata ogazingiwe, njll.
Eduze kwe-Muzhai Homestay kuneGengguoxue Park yaseSifundazweni saseZhaotong. Leli paki lihlanganisa indawo yonke engamamitha-skwele angu-655,497, nendawo eluhlaza eyi-247,902 square metres, kanti enye ingxenye yamanzi. Indikimba yaleli paki iwubuciko obuhle kakhulu obuthi "Provincial Farming Fu", okuqukethwe kwayo okuyinhloko kuwukuthuthukisa isiko lamaShayina. Kunezikwele ezinhlanu ezinkulu, ezifana ne "Poetry and Song Fu", "Shenggeng Plaza", "Qinqi Calligraphy and Calligraphy", "Four Books, Five Classics", kanye "Nezazi Eziyikhulu", kanye "neGuoxue Cultural Corridor" esabalaliswe nxazonke. yesifundazwe Gengtang Reservoir. Kukhona izimpophoma, nemithombo zomculo, landscape amabhuloho, amabhishi, njll Ukusebenza ngokugcwele. Yindawo engcono kakhulu yokubuka indawo nokuthatha izithombe.
Kukhona nedolobha le-sauna nelokugeza ngezinyawo eduze nendawo yokuhlala: i-Huoyingtian, izindawo zokudlela eziningi zama-Hui nama-Han kanye nezitolo zokosa inyama. Ungakwazi futhi ukunambitha ukudla okulula okuhlukahlukene okuhlukile kwe-Zhaotong: ama-skewers enyama amancane, i-jelly, i-bait yekhekhe likawoyela, ufulawa omncane wesoya, amazambane agazingiwe, ubhatata ogazingiwe, njll.
Ungaxhumana noma nini uma kunesidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Zhaotong namaphethelo